Inguqulelo entsha yeQt Design Studio 2.0 sele ikhutshiwe | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeQt Design Studio 2.0 sele ikhutshiwe
Ubumnyama | | Imizobo, software
Inguqulelo entsha yeQt Design Studio 2.0 sele ikhutshiwe, Olu khululo luza notshintsho olukhulu, kubandakanya isixhobo sikaGoogle sokuqhekeka esisekwe kwindawo yokusebenza (indlela yokufaka, ukugcina kunye nokuhambisa iingxelo zengozi yokufa emva kwesicelo ukuya kwiseva yokuqokelela enyukayo).
Ngokuzenzekelayo, iCrashpad ayilayishi iingxelo ezenzekileyo zokuhlaselwa njengoko ibamba umxholo wokungqubana kwimemori yenkqubo ye-Qt Design Studio. Ke ngoko, inkunkuma inokuqulatha ulwazi olubuthathaka njengamagama eprojekthi.
Ngubani lowo awazi ngeQt Design Studio, Kuya kufuneka bayazi ukuba yintoni imeko yoyilo lomdibaniso womsebenzisi kunye nophuhliso lwezicelo zemizobo esekwe kwi-Qt. I-Qt Design Studio yenza kube lula ukuba abayili kunye nabaphuhlisi basebenze kunye ukwenza iiprototypes ezisebenzayo zonxibelelwano oluntsonkothileyo nolunokutsha.
Abaqulunqi banokujonga kuphela kuyilo lwegraphic, Ngelixa abaphuhlisi banokugxila ekuphuhliseni i-logic yesicelo besebenzisa ikhowudi ye-QML ezenzekelayo, usebenzisa ukuhamba komsebenzi okwenziwe kwiQt Design Studio, ungaguqula uyilo olulungiselelwe kwiFotohop okanye abanye abahleli bemizobo babe ziiprototypes ezisebenzayo ezifanelekileyo ukumiliselwa kwizixhobo eziyinyani ngemizuzu.
1 Izinto eziphambili ezenziwayo zeQt Design Studio 2.0
2 Fumana uyilo lweStudiyo 2.0
Izinto eziphambili ezenziwayo zeQt Design Studio 2.0
Enye yeenoveli eziphambili ezibonakala kule nguqulo intsha yeQt Design Studio 2.0 yile Inkxaso yokulinga yeQt 6 (uguqulelo olukhutshwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ukuba ufuna ukwazi okungakumbi ngalo unokujonga kupapasho esilwenzileyo Kule khonkco ilandelayo), ukusukela le nguqulo ibandakanya i-graphical API engabonakaliyo engaxhomekekanga kwi-3D API yenkqubo yokusebenza.
Olunye utshintsho oluboniswe kule nguqulo intsha sisixhobo sokunika ingxelo ngesiphene esasikhankanyiwe ekuqaleni. Iphakheji ibandakanya iplagi yokuqokelela i-telemetry, efanayo nale ibonelelwe kuMdali weQt.
Iplagi isekwe kwisakhelo se-KUserFeedback esiphuhliswe yiprojekthi ye KDE. Ngobumbeko, umsebenzisi angalawula ukuba loluphi uhlobo lwedatha oludluliselwe kwiseva yangaphandle kwaye ukhethe inqanaba leenkcukacha zetelemetry. Ngokuzenzekelayo, ingqokelela yeetelemetry ikhubazekile, kodwa ukuba banqwenela, abasebenzisi banokuthatha inxaxheba kwingqokelela engaziwayo yolwazi malunga nokusetyenziswa kwemveliso ukuphucula umgangatho wayo.
Silanda ubungakanani bexesha kunye nexesha lokusetyenziswa kwemisebenzi ethile ngaphakathi kwesicelo. Ngokusinika le datha, abasebenzisi bayasinceda ukuphucula iinguqulelo zeQt Design Studio. Siyiqonda ngcono indlela abasebenzisi bethu abayisebenzisa ngayo imveliso kunye nendlela ebaluleke ngayo into ethile.
Olunye utshintsho olwahlukileyo kule nguqulo intsha:
Inkxaso eyongeziweyo yokuvelisa izithonjana, ngoncedo lwazo, umzekelo, onokwenza iingcebiso kunye nokujonga kuqala ii-icon eziphinda izinto zomdibaniso.
Inkxaso yovavanyo lweQt Bridge yenziwe ukuba ingenise uyilo oluvela kwiFigma.
Yongeze amandla okwenza iiprojekthi ze-Qt yesakhelo se-MCU, ekuvumela ukuba wenze usetyenziso lwee-microcontrollers kunye nezixhobo ezinamandla asezantsi.
Ujongano lokwenza iziphumo ze-2D lutshintshiwe.
Ekugqibeleni, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo yale nguqulo intsha, kunye nesoftware, ungajonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Fumana uyilo lweStudiyo 2.0
Kwabo banomdla, nceda wazi ukuba uhlobo lwentengiso kunye nohlobo loluntu lwe Qt Uyilo lwe Studio. Inguqulelo yorhwebo inikezelwa simahla kwaye ivumela ukuhanjiswa kwezinto ezilungiselelwe ujongano kuphela kubanini belayisenisi yorhwebo yeQt. Ushicilelo loLuntu alunyanzelisi zithintelo, kodwa alubandakanyi iimodyuli zokungenisa imizobo kwiFotohop kunye neSketch.
Isicelo luguqulelo olukhethekileyo lwendalo ye-Qt yoMakhi, eyakhiwe kwindawo yokugcina eqhelekileyo. Uninzi lweQt Design Studio iinguqu ezithile ziya kwisiseko seKhowudi yoMyili esisiseko. Ukudityaniswa kweFotohop kunye neSketch kungumnini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Inguqulelo entsha yeQt Design Studio 2.0 sele ikhutshiwe
Umyili weQt 4.14 ufika nenkxaso yeQT 6 nangaphezulu
Tyhila.js, yenza imiboniso usebenzisa i-CSS kunye ne-HTML kwi-Ubuntu 20.04